सामाजिक संलग्नताका लागि सफल रणनीति Martech Zone
शुक्रबार, डिसेम्बर 14, 2012 शुक्रबार, मे 17, 2013 Douglas Karr
हामीले यस बारे लेखेका छौं सर्टस्ट्याक विगत र आज उनीहरूले सहयोगी इन्फोग्राफिकको साथ एक राम्रो नोट पठाए। के तपाई आफ्नो ब्रान्ड वा ब्यापारमा व्यस्त रहनको लागि प्रयोगकर्ताहरूलाई उत्प्रेरित गर्ने उत्तम तरिका अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ? तपाइले बुझ्नुभयाे: प्रतियोगिता! त्यो के हो सर्टस्ट्याक तिनीहरूले 800०० भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरूको सर्वेक्षण गरे। (PS: यो हाम्रो सम्बद्ध लिंक हो)
त्यस नतिजाले हामीलाई आश्चर्यचकित गर्न सकेन - किनकि हामी प्रत्येक दिन देख्छौं कि प्रतियोगिताले लाइकहरूलाई कसरी बढाउन र साझेदारीलाई प्रेरणा दिन सक्छ। हामीलाई के छक्क लाग्यो कि survey 38% उत्तरदाता जसले हाम्रो सर्वेक्षणमा भाग लिएका थिए कहिल्यै प्रतिस्पर्धा चलेनन्। खैर, फोटोहरू प्रतियोगितामा दोस्रो स्थानमा आए र भित्ता शीर्षकहरू तेस्रो लिनुभयो।
केहि अन्य खोजहरु:
उत्तरदाताहरूको %२% उनीहरूले सोच्दछन् अझ राम्रो गर्न सक्छ उनीहरूको सामाजिक मिडिया प्रयासको साथ
%१% ले प्रयास गरेको छ फोटो प्रतियोगिता
%२% प्रयोग भन्सार ट्याबहरू उनीहरूको फ्यानहरूलाई मोहित पार्न
१%% प्रयोगकर्ताहरू प्रयोग गर्छन् आफ्नो प्रतियोगिताको लागि भिडियो
यस इन्फोग्राफिकको बारेमा मेरो प्रतिक्रिया भनेको यो शब्द हो भनेर विश्वास गर्दछु संलग्न थोरै थोरै प्रयोग गरिएको छ। मलाई यो शब्द मनपर्छ प्रलोभन अझै धेरै। मेरो विचारमा, सगाई व्यवसाय गर्नु जस्तै हो, केवल केही ईनामको लागि स्वैपको रूपमा अनुसरण वा पाउनु मात्र होइन।
यि खोजहरू अझै महत्त्वपूर्ण छन्, यद्यपि! रणनीतिहरूले तपाईंको ब्राण्डमा बढी यातायात र सचेतना जगाउन सक्छ ... जहाँ तपाईं दर्शकहरू वा समुदायलाई संलग्न गर्न सक्नुहुन्छ।
टैग: प्रतियोगिताप्रयोगकर्ताहरू संलग्न गर्नुहोस्मंगनीप्रलोभनइंफोग्राफ़कफोटो प्रतियोगिताशर्टस्याकप्रयोगकर्ता